Tantaran'ny angovo avy amin'ny rivotra, nanao ahoana ny fivoarany? | Fanavaozana maintso
Adriana | | Herin'ny rivotra, Angovo azo havaozina
Ankehitriny ny herin'ny rivotra Izy io dia iray amin'ireo loharanom-pahalalana azo havaozina be mpampiasa indrindra ary iray izay nahatratra ny fivoarana ara-teknika lehibe indrindra tato anatin'ny folo taona.
Ny fampiasana sy fitrandrahana angovo rivotra dia efa antitra tokoa amin'ny olombelona. Ny porofo voalohany amin'ny fampiasana ny rivotra dia nanomboka tamin'ny 3000 talohan'i Kristy izay nampiasan'izy ireo sambo sambo ony Neily hifindra ary tamin'ny taonjato faha-XNUMX talohan'i JK nandritra ny fanjakan'i Hammurabi tany Babylona dia nampiasa rafitra fanondrahana mifototra amin'ny windmills ho an'ny paompy rano. Ka andao hiverina amin'ny lasa ary hianatra bebe kokoa momba ny tantaran'ny angovo rivotra.
Ny niandohana sy ny tantaran'ny angovo rivotra
Manodidina ny taona 1000 AD dia ampiasaina any Moyen-Orient ny Windmills voalohany ary nandritra ny faramparan'ny taonjato antenatenany dia nanomboka nampiasaina tany Eropa ny fitaovana angovo mekanika.
Ireo fitaovana na fikosoham-bary ireo dia nanjary nalaza indrindra tany Holandy izay nanomboka ny antenatenan'ny taonjato fahefatra ambin'ny folo dia nampiasaina mba hanamainana ny honahona sy ny farihy ankoatry ny fikolokoloana voa, dia izy ireo fikosoham-bary marobe, somary miadana.
Ny maodely alohan'ireo ankehitriny dia hita tamin'ny taonjato faha-XNUMX ary ny voalohany dia novokarin'i Jacobs ho an'ny famokarana herinaratra any amin'ny faritra ambanivohitra, miaraka amin'ny fitaovana 3 KW nandritra ny taona 30 tany Etazonia Tamin'ny 1940, ny rivotra mahery lehibe voalohany sy haingana dia haingana nisy 1 MW.
Nandritra ny Ady Lehibe Faharoa ny tetik'asa sy ny fivoaran'ny fitaovana toa ny turbine mitsangana mitsangana turbinina rivotra hamokarana herinaratra satria ny menaka dia mora vidy kokoa sy mifaninana amin'ny tsenan'ny angovo.
Ny dingana lehibe manaraka amin'ny tantaran'ny angovo rivotra dia mitranga etamin'ny taona 70 rehefa nipoaka ny krizy solika Miverina indray ity teknolojia ity ary tsy nampiato ny fitomboany sy ny fampiasana azy erak'izao tontolo izao mandraka androany.
Tao anatin'izay roapolo taona lasa izay, fandrosoana ara-teknolojia be no vita ary fitaovana tena mahomby miaraka amina fahaizana lehibe Famokarana angovo MADIO tsy an-tanety ihany fa eny an-dranomasina koa.
Ny angovo avy amin'ny rivotra no ho iray amin'ireo lehibe indrindra loharanom-baovao angovo azo havaozina tamin'ny taonjato faha-XNUMX tany amin'ny firenena marobe, noho ny toetra mampiavaka azy ireo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fanavaozana maintso » Angovo azo havaozina » Herin'ny rivotra » Tantaran'ny angovo avy amin'ny rivotra
Lool dia hoy izy:
Misaotra anao nanompo ahy be dia be.
Mamaly an'i Lool
yendely dia hoy izy:
tsy ilaina izany apetraho ny
Valio i yendely
steef dia hoy izy:
Raha manompo betsaka ny niandohany
Mamaly amin'ny steef
ROBERTO GIMENEZ dia hoy izy:
INDRINDRA NY SITOTRA NY PEJY TSY MANOMPO CHOTO ETO ANATREHANA AZO 1 Ho an'ity pejy ity PORONGA MIKASIKA CHOTA
Valio amin'i ROBERTO GIMENEZ
Ny raharaham-pianakaviana izay nandresy tamin'ny lavanty azo havaozina (Norvento)